मेरो प्यारो ओखलढुंगा | साहित्य संसार
पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ - समाश्री	भेटवार्ता - भगवती बस्नेत	नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो - लारा [LARA]	दर्शन र चिन्तनको गोठालो हुनुपर्छ आजका पाठक - समदर्शी काँइलासँग कुराकानी	फेसबुकको हल्लाखल्ला भर्चुअल मात्र हो - केदार संकेतसंग कुराकानी	साहित्य संसार लेखक सूची: मेरो प्यारो ओखलढुंगा ★ डा. कविताराम श्रेष्ठ★ प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुन १६, २०७०
लेखक : डा. कविताराम श्रेष्ठ विधा/श्रेणी : संस्मरण रचना संख्या :4प्रकाशन मिति : शुक्रबार, फाल्गुन १६, २०७० डा. कविताराम श्रेष्ठका अरु रचनाहरु तलुवा डाडाँलाई म चढेको जहाजले फेरो मार्न लाग्दा झ्यालबाट छर्लंग देखें – ओखलढुंगा । अनायास मेरो अन्तस्करणले उच्चारण गर् यो – मेरो प्यारो ओखलढुंगा । तपाईलाई अवश्यै लाग्यो होला कि यी शव्द त युगकवि सिद्धिचरणका हुन् जसलाई उनले आफ्ना अमर कृति मेरो प्यारो ओखलढुंगा नामक कवितामा कैद गरेका थिए ।
यो कविको शैसवकाल वित्यो
हाँस्यो खेल्यो वनकुन्ज घुम्यो
मलाई यतिखेर अनुभूत भयो युगकवि सिद्धिचरणले त्यो कविता कविता भनेर लेखेका थिएनन् । अर्थात् जन्मभूमीको भार तिर्नकै लागि मात्र उनले प्रशस्ति लेखेका थिएनन् । जसरी आफ्नो जन्म र शैशवकालको थलोको एकै झलकले मभित्रको शैशवकालीन आशक्ति बोल्यो त्यसरी नै उनको मानसपटलमा अंकित आफ्नो जन्म र शैशवकालको थलोको परिदृष्यले उनी भित्रको शैशवकालीन आशक्ति बोलेको थियो – मेरो प्यारो ओखलढुंगा !
कविता त बन्यो त्यो तर कविता मात्र त्याहाँ थिएन । कविताको प्रकृति भन्दा यसमा अलग भावावेग छ । मेरै हिसावमा हेर्नुहोस् न मैले यो संस्मरण लेखिरहँदा समेत यो त्यसरी नै यी अक्षरहरुमा मेरा अन्तस्करणको प्रतिविम्व भएर प्रस्फुटित भइरहेछ । अहिले म कविता रच्दैछैन र कवितामा मेरा यी शव्दहरु बुनिएका छैनन् र पनि यी त्यसरी नै प्रस्फुटित भइरहेछन् जसरी युगकविका हरेक पंतिहरुमा हुने गरेका थिए । मेरो प्यारो ओखलढुंगा !
अव बुझ्नोस् जव म पहिलोपल्ट २५ वर्षको अन्तरालमा जहाजको झ्यालबाट समग्र ओखलढुंगाको दृष्य हेर्दै थिएं भने मेरो अन्तस्करणले कसरी भावावेशमा भनिरहेको थियो होला – ूमेरो प्यारो ओखलढुंगाू । मान्नोस् यी शव्दहरु युगकविका कविताबाट मैले उधारो लिइरहेको थिइन । मेरा आफ्नै अन्तस्करणको बोली थियो त्यो । त्यो त्यतिकै मौलिक थियो जति कविज्यूको थियो । मेरो प्यारो ओखलढुंगा !
जहाजले रुम्जाटारको भूई छोयो । रुम्जाटार रमणीय रुम्जाटार ! ओखलढुंगाको लागि एक मात्र हवाई थलो रुम्जाटार !! यहाँबाट झण्डै ३ घण्टाको बाटो िहंडन पर्छ ओखलढुंगालाई । एउटा आधा घण्टा जतिको छोटो आरालो त्यसपछि सिस्ने खोला तरेर पौने घण्टा जतिको तेसो्र बाटो र रुम्टीखोला तरेपछि झण्डै एक घण्टाको ठाडो उकालो – मेरो प्यारो ओखलढुंगा !
हवाई ग्राउण्डमा उत्रेपछि हेरें प्यारो ओखलढुंगालाई । त्यो त्याहाँ नै थियो जाहाँ मैले २५ बर्ष पहिले छोडेको थिएं । सवै उस्तै । फरक यत्ति कि त्यो पहिले देख्दाको तुलनामा नजिक लाग्दै थियो । सायद उमेरको भिन्नता ले यो भिन्नता दियो । मेरो प्यारो ओखलढुंगा !
रुम्जाटारको पश्चिमी डीलमा उभिएर हेरें – उही पुराना मनोरम दृष्य – हिमाल पाखा-पर्वत खोला-नाला वारी गाउँ खेत । म भावविभोर भएं । मनैमनले एउटा परिचित धुनमा एउटा नयाँ कविता गुनगुनायो । सायद यो गीत भयो –
यो आसक्ति अतिसयोक्ति भयो कि म केही भन्न सक्तिन्न । तर कविता भनेर रचेपछि त्यसमा सायद केही अतिसयोक्ति हुन्छ नै । अतिसयोक्ति भएन भने भावनाको कुनाको आंकन नै कहाँ पुर् याएर गर्ने सायद अतिसयोक्ति नभए यो कोरा लेख मात्र हुन्छ । जे होस् मैले यसरी गिती-कविता बनाएं । अनि डीलमै बसेर त्यसलाई कागजमा पंक्तिबद्ध गरें ।
रुम्जाटारबाट ओखलढुंगासम्म सेतो बाटोको धसो्र छर्लंग देख्न सकिन्थ्यो । त्यो खुडकिलो त्यो भिरालोपना त्यो बाटोको नामको कुलो – ठ्याक्कै त्यस्तै थियो जस्तो मैले िसंगो ओखलढुंगगालाई छोडेको वेलामा थियो । मैले सुनेथें ओखलढुंगा बजारमा विकासका धेरै पूर्वाधारहरु खडा भइसकेका छन् । तर त्यसैको हवाईथलोसम्म पुग्ने बाटोको हालत किन अझै त्यही ठूलै प्रश्न सोधें आफैलाई ।
अन्तिम उकालोको अन्तिम भाग – याहाँबाटै मेरो घरको पछिल्लो भाग प्रष्टै देख्न सकिन्छ त्यो ओखलढुंगे डाडाँमा । सास जतिसुकै फुलेपनि म दौडें । त्यो घर त्यसरी नै उभिएर रहेको थियो जसरी मैले छोड्दा रहेको थियो । त्यो झ्याल जहाँबाट मेरो वालहृदय पूर्वी भूगोल र आकाशमा वालसूलभ काल्पनिक उडानहरु भथ्र्यो ठ्याक्कै त्यस्तै गरी त्याहाँ नै रहेको थियो ।
एकै छिन उभिएं । एकैछिन गमें । एकै छिन आँकें । एउटा वालक भएर मैले पूर्वको रुम्जाटार चिसंखु डाडाँ नेचा डाडाँ माम्खा डाडाँलाई त्यही झ्यालबाट देखिने दृष्यलाई सम्झें । ती दृष्यहरु मेरो मानसपटलबाट धुमील थियो । आफू स्पष्ट हुन त्यही ठाउँबाट पूर्वतिर फर्केर हेरें । डाडाँमाथि अवस्थित घरको झ्यालबाट देखिने त्यो दृष्य यति तल्लो भूभागबाट देख्न कसरी सकिन्थ्यो देखिएन । देखिएन मात्र होइन बरपरका रुखहरुले मेरो अघि ड्याम्मै छेकेको थियो । मैले त्यो आसक्तिलाई त्यागें । बरु त्याहाँनिरै एउटा आरुको रुख थियो । त्यस रुखमा कोमल हरिगोविन्द रबिहरुको साथमा यही ठाउँबाट काँचो आरु झार्न ढुंगा हान्ने गर्दथें । तर त्यो रुख अव त मासिइ सकेछ ।
उता तलतिर धेरै नयाँ घरहरु बनेछन् । नयाँ बाटो पनि कोरिएछन् । संगै िहंडने साथीले मोटरको बाटो पनि देखाइदियो । केही दिन भित्रै मोटर याहाँ आइपुग्छ भनेर गमक्क परेर उनले मलाई सुनायो । यही तलैबाट विजुलीका लाइनहरु पनि देखियो । विजुली मात्र होइन अव घरघरै टेलीभिजन छ रे धक्कूकै स्वरमा मेरो मित्रले थप्यो । यी सवै नयाँ हुन् मेरो लागि । विजुली कलधारा मोटर बाटो र धेरै अरु विकासका पूर्वाधारहरु – मैले नसुनेको होइन । सुनेको पनि हुँ तर प्रत्यक्ष दर्शनको आनन्द अर्कै हुने रहेछ । म चकित भएं । नसोचेको पाराले चकित । मलाई त्याहाँ माथि बजारमै पुगेर यी सवलाई अनुभूत गर्ने लोभ जाग्यो । म माथितिर वेतोडले लम्कें ।
राम बजार चोक बजार भैरवटोल गणेशटोल । बजार त्यही हुन् । ज्यादाजसो घरहरु त्यही देखिन्छन् । तर फरकहरु छन् । बजार सिनिक्क सफा ! घरहरु टिलक्क चम्किला ! मान्छेहरु पनि सफा ! विजुलीका खम्बा ढलको सुविधा घरघरै पानी घरघरै टेलीफोन घरघरै चर्पी स्कूले युनिफर्ममा वालवालिका पश्चिमी आधुनिक वेशभूषाको चमक पश्चिमी संगीत तथा आधुनिक नेपाली संगीतको गुन्जन् टिभी डिस्क एन्टेना ! गुणात्मक परिवर्तनको आभास स्पष्ट थियो । सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक परिवर्तनको आभास ! ओखलढुंगालाई आधुनिकताले राम्ररी च्यापेको वोध भयो । यो बजार त्यही हो र पनि त्यही बजार नरहेको आभास भयो । यो निश्चय नै फरक थियो मेरो लागि । त्यो पुरानो त्यो झण्डै पुरातन ओखलढुंगा मेरो अघाडि थिएन । एउटा आधुनिक शहरको रुपरंगमा थियो यो – मेरो प्यारो ओखलढुंगा !
सेलरोटी चिया र आलु-तरकारीका पसलहरु मात्र भएको त्यस बजारमा अव भातका होटल मोमो थुक्पा चाउमी मासुका थरीथरीका परिकार मिठाई वियर रम ह्वीस्की आदिका रेष्टुरेन्ट वार र पसलहरुको प्रावधान पनि भइसकेछ । परदेशीहरुको लागि पाटी या स्वजनको घरमा बास हुने यस बजारमा अव होटल र लजहरु खुलेछन् । रेडियो घडी क्यालकुलेटर टिभी औषधी पसल रेडिमेड गार्मेन्ट फोटो स्टुडियो फोटोकपि कम्युनिकेशन सेन्टर भिडियो र अडियो क्यासेटका पसलहरु त्यसवेला कल्पनासम्ममा थिएनन् । अहिले त यी सव आधुनिक ओखलढुंगाका गहना बनिसकेका रहेछन् । एउटा नगरोन्मूख गाउँको स्वरुप यसले लिइसकेछ – मेरो प्यारो ओखलढुंगा !
मुख धुन नुहाउन र सूची गर्न पाखापाखा दगुर्न नपर्ने भएसकेछ । घरैमा बाथरुमको चलन आइसकेछ । घरैमा बसेर नेपाल त के संसारको कुनैपनि कुनामा सम्पर्क राख्न सकिने भएछ । फ्याक्स पठाउन सकिने भएछ । इमेल पठाउन सकिने भएछ । कलेज खुलेछन् । प्राइभेट स्कूलहरु खुलेछन् । वैकहरु खुलेछन् । पत्रपत्रिकाका पसल खुलेछन् । गैह्रसरकारी सामाजिक संस्थाहरु खुलेछन् । वकिलका अफिसहरु खुलेछन् । डाक्टरका क्लिनिकहरु खुलेछन् । मोटरको बाटो गाउँको सीमामै आइपुगेछ । नयाँ बन्ने भवनहरुको वास्तुकलाले पनि काँचुली फेरेछन् । बजारले एउटा शहरको रुप निश्चित रुपमा लिन थालीसकेछ । साँच्चै नै वजारबासीले नाम दिए झै यो नगरोन्मूख भइसकेछ – मेरो प्यारो ओखलढुंगा !
मैले देखेका बुढाबुढीहरु अव त धेरै नै स्वर्गे भएछन् । म भन्दा अधिल्ला िपंढीका अग्रजहरुले त्यो ठाउँ लिएछन् । भोटो र दौरा सुरुवाल वा बेसीमा कमेजसम्म लगाउने उ वेलाका पाकाहरुका ठाउँमा कमेज पेन्ट वा लवेदा सुरुवाल लाउनेहरु देखिन्छन् । थाप्लोमा पानीको गाग्री वा दाउराको भारी बोक्ने बजारिया महिलाहरुको ठाउँमा किताव वा ह्याण्डव्याग झुन्ड्याएर अफिस जाने महिलाहरु देखिन्छन् । मान्छेको जीवनशैलीले काँचुली फेरेछ । जीवनस्तरले काँचुली फेरेछ म दंग भएं – मेरो प्यारो ओखलढुंगा !
वारी हेरें पारी हेरें त्यो रुखासुखा डाडाँ गायव थियो । हरियालीले छाएछ । झपक्कै बनले ढाकेछ । लता लतिका पंछिहरुको सुमधुर गान धारा र खोलीको कलकल ध्वनी ! अव चािहं सिद्धिचरणले कवितामा कुँदेको हरियाली र शीतलताले परिपूर्ण ओखलढुंगाले पूनर्जन्म पाएछ । उ वेला बागले बाख्रा खायो भनेको सुन्दा सुन्दै स्यालसम्म बस्न नहुने गरी मासिएर गएको बन अहिले फेरि बागै बस्न आउने गरी विकसित भएछ । हामी केटाकेटीहरुले साँझसम्म खेलमा रमाउने गरेको त्यो धाराको पाखा त्यो ताराहान्ने पाखा अव त दिउँसै एक्लै जान डरलाग्ने गरी रुख र घारीहरुले छोपिएछन् । लाग्यो स्थानीय ओखलढुंगेहरुले अव आफ्नै मनमा बन रोपेछन् आफ्नै मस्तिष्कमा बन हुर्काएछन् । अझ यसरी भनौं – स्थानीय ओखलढुंगेहरु माझ सामुहिकताको भावना बेस्सरी झांगिएछ । भावविभोर भएर चिच्याई चिच्याई भन्न मनलाग्यो – बन होइन समुदायिक बनको नाममा स्थानीय ओखलढुंगेहरुले पारस्परिक सहयोग र सहभोगको भावना वेस्सरी हुर्काएछन् – मेरो प्यारो ओखलढुंगा !
यो परिवर्तनको आभास मलाई याहाँ आइपुग्न अघि थिएन । याहाँ आएर यसको परिवर्तनको अवलोकन पछि मात्र अनुभूत भयो । याहाँ धेरै पूर्वाधारहरु विकसित भएको बारेमा वर्षौसम्म सुन्दा पनि कसरी यो परिवर्तनको सोच ममा रहेन कसरी म त्यही पुरानै ओखलढुंगाको स्वरुपमा हराईं रहें यो ठ्याक्कै त्यस्तै भयो जस्तो तपाईले आफ्ना कोही स्वजनलाई वालखैकालमा छोडेर गएपछि उनको यौवनावस्थामा एकैपल्ट देख्दा हुन जान्छ । व्यक्ति त त्यही हो तर उनमा भएको परिवर्तनको आंकन हुन नसकेको हुँदा प्रथम दर्शनमा आश्चर्यको सीमा रहेको हुँदैन । परिपवर्तन व्यक्ति वा वस्तु वा सामाजिक परिघटनाहरुमा हरकहींँ अपरिहार्य छ । तर तपाईँको अनुपस्थितिमा भएको विकास वा परिवर्तनहरुको सही प्राक्कल्पना हुन नसक्ने हुँदा तपाईको आंकन वास्तविकता भन्दा धेरै निर्वल हुन जान्छ र वास्तविकतासंग जम्काभेट हुँदा तपाईका सोचले अवश्यै धक्का खान्छ । त्यही भयो मलाई ।
जे होस् । ओखलढुंगाको यो विकसित सामाजिक रंग – यो विकसित सामाजिक रुपले मलाई उन्माद दियो । म खुशीले गम्कें । म गौरवान्वित भएं । म रमाएं । बारबार एउटै शव्द दोहोरियो मेरो मानसमा – मेरो प्यारो ओखलढुंगा !
हेर्नुहोस् त म यहाँ भवनामा डुविरहेछु । तर युगकवि सिद्धिचरण झैं कविताको भावसागरमा डुवेको छुईन । कविताको भावसागरमा नडुव्दा नडुव्दै पनि भावनामा बिगंदो रहेछ । स्मृतिपटलमा आएको दृष्य वस्तु वा परिघटनाले मात्र होइन ती कुराको वस्तुगत अवलोकनले पनि मान्छेमा उन्माद िदंदो रहेछ । भावनामा डुवाउँदो रहेछ । त्यस्तो उन्मादी सुखले भावविभोर बनाउंदो रहेछ । कविता याहाँ पनि बन्ला । बनाउन सकिएला । तर यहाँ म कविता रचि रहेको छुइनं । कविता नरच्दा नरच्दै पनि बारम्वार मेरो अन्तस्करणमा आइरहेछ – मेरो प्यारो ओखलढुंगा ! एकपल्ट होइन बारम्बार ! मान्नुहोस् मैले युगकविज्यूबाट यी शव्दहरु उधारो लिएको छैन । यी मेरा मैलिक अभिव्यक्ति हुन् – मेरो प्यारो ओखलढुंगा !
छोक सागओल दोस्तलार
सम्बन्धित थप सामाग्रीहरु : संस्मरण: खिच्न नसकेको फोटो हनी पफ संस्मरण : युद्दभूमी इराकको यात्रा मध्यरातमा चौराह देखि क्याम्पसचोकसम्म छालमा रुझेकी उ नाब्रानमा गर्मी याम – सागओल अजरबैजान छोक सागओल दोस्तलार सम्झनामा मेरा अग्रज,गाँउ,स्कुल र बालसखा नेपाली साहित्यको सानो संसारसाहित्यिक अनलाइन पत्रिकाईमेल : info@sahityasansar.com